QALITAANKA BAQDINTA: SIDA LOO SAMEEYO QAAB DHAQAALE LEH GACMAHAAGA - BEERAHA DIGAAGA
Nafaqaynta iyo koritaanka digaagga ee guriga waa ganacsi faa'iido leh.
Ka dib dhammaantood, shimbiraha yar yar waxay cunaan cunto aad u yar, laakiin isla markiiba waxay ukumo si fiican u bixiyaan waxayna bixiyaan xitaa qadar yar oo hilib ah, laakiin waxay leedahay qiimo weyn.
Haysashada digaagdarrada gabi ahaanba dhib ma leh, maadaama ay xitaa ku noolaan karaan guri, haddii aad dhisto qafis gaar ah.
Xaqiiq ahaan sida loo sameeyo tani waxay noqon doontaa maqaalka hoose.
Waxaan isku dayi doonaa inaan kula wadaagno maaha oo kaliya qeybaha kala duwan ee unugyada, laakiin sidoo kale si aad u kicin karto hal-abuurkeena, inaad ka ogaato shuruudaha aasaasiga ah ee dhismaha.
Waa maxay unuggu waa inuu u egyahay: aqoonta shuruudaha aasaasiga ah iyo shuruudaha
Waxay u egtahay in haadda shimbiraha ee guriga - ay tahay jawi joogto ah, boodh iyo hawo nadiif ah. Laakiin, dhab ahaantii, dhammaan arrimahan aan fiicnayn ayaa aad u fudud in la iska ilaaliyo haddii aad doorato qaabka saxda ah ee unugta mustaqbalka.
Iyadoo taasna, xitaa ma aha in la iibsado, laakiin waa wax macquul ah in aad naftaada u sameyso qalab iyo wax jaban.
Guud ahaan, haddii aad si fiican ula macaamilayso shuruudaha loo soo gudbiyo unugyada noocaas ah, markaa waxaa suurtagal ah in aanad caddayn dheeraad ah si loo dhiso midda saxda ah ee adiga kugu habboon. Hoos waxaan kuugu soo ogaan doonaa shuruudahan oo kale.
Aad bay muhiim u tahay in digaagga qafisku leeyahay meel ku filan nolosha. Sidaa daraadeed, cabirkeedu waa inuu ku saleysnaado xisaabinta 1 qof ee 100 cm2.
Xaqiiqdii waad ka tagi kartaa meelo badan, laakiin ka fikir inaad ka faa'iideysan karto naftaada?
Xayeysiida shakhsiyaad badan oo ku jira hal qafis maaha mid u qalma.
Ugu horreyntii, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso qoryo weyn, iyo marka labaad, fara badan oo shimbiro ah oo ku yaala meel bannaan oo ku xiran ayaa saameyn ku yeelan kara caafimaadka iyo ukunta.
Ha iloobin waxa loogu yeero "ukunta ukunta" - taas oo ah, dabaqa dhulka, kaas oo ukumuhu soo saari doono ururinta fudud.
Xaaladdan oo kale, dhererka darbiga gadaashiisu wuxuu gaari doonaa 20 sentimitir, halka kan hore uu noqon doono 5 sentimitir. Laakiin waqti isku mid ah, xaglaha rabitaanka ee ururinta ukumaha waa in aanay noqon wax ka badan 8-10ºS, haddii kale shimbiraha ayaa sidoo kale soo rogi doonaa.
Kalluunka laftirkiisa laftiisa waa inuu ka soo baxaa dhinaca hore ee qafiska, oo 7-10 sentimitir ayaa ku filnaan doona tan, sidoo kale waa lagama maarmaan in la xiro boomers, haddii kale ukumo hoos u dhaco oo hoos u dhaco.
Habka ugu caansan ee loo sameeyo unugyada waa in la isticmaalo mesh silig. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo ballaadhka unugyada, taniyo digaagduurku waa shimbir aad u yar, oo aan lahayn dhibaatooyin waxay awoodi doonaan inay ka soo baxaan furitaan ballaadhan. Sidaa daraadeed, si aad u hesho shabakad leh unugyo ka weyn 1.2 ilaa 1.2 sentimitir maaha mid u qalma.
Dhexdhexaadiyaha silig, taas oo ku xirnaan doonta awoodda unugyada, waxay ku kala duwanaan kartaa 0.9 ilaa 2 millimitir.
Way ku haboon tahay in lagu daro derbiga hore ee qafiska iyo shaqada albaabka. Taas awgeed, waxay ku xiran tahay qaabka ugu muhiimsan ee looyarrada gaarka ah, ama qaybo fudud oo silig ah. Tani waxay si weyn u kaydin doontaa meel.
Bilaabidda Dhisidda Qalabka: Tilmaamaha Aasaasiga ah
Faa'iido iyo dhiirigelinta xulashada qalabka ugu caansan ee soo saaridda unugyada
Ka hor inta aanad samaynin soo saarida si toos ah ee unugyada, waa muhiim in la doorto wax. Waxaa lagama maarmaan ah in arrintan lagu sii wado xaqiiqada ah in ay noqon doonto mid aad ufurnaan ah oo kharashkana aad u raqiisan doonta, maaddaama mid walbaa uu leeyahay faa'iido iyo faa'iido daro.
Haddii aad go'aansatid inaad doorbidid inaad doorbidayso qafis bir ah oo laga sameeyey biraha birta ah ee la galoofiyey (inkastoo la isticmaalayo mesh aluminiinka ama mesh joogta ah waa natiijo wanaagsan), markaa ugu horreyntii waxaad ku guuleysan doontaa mudnaanta qaab-dhismeedka noocan oo kale ah.
Sidoo kale, qafis bir ah ayaa loo tixgeliyaa nadaafadda ugu badan, maadama ay si fudud u kicin karto dabka, blowtorch, ama karkarinta biyaha. Intaa waxa dheer, unugyada waxaa laga helayaa xarumo adag, taas oo u ogolaan doonta qoraxda inay si buuxda u buuxiso booska unugyada.
Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waa wax aad u fiican waxaa la aqbali karaa in la sameeyo baqshadaha qoryaha ama in lagu dhajiyo alwaax leh biraha. Waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho hilibka lo'da, bjørk, qoryaha qoryaha ama qoryaha geedaha sida qalab.
Marka la eego ikhtiyaarkan, muusikada unugyada, gogosha maaddada waxay noqon doontaa faa'iido, waxay ku habboon yihiin gudaha gudaha, taas oo dhab ahaan looma sheegi karo unugyada birta. Si kastaba ha noqotee, alwaax iyo isku dhafan ayaa badan maqnaanshaha:
Qoryaha looma daaweyn karo cayayaanka oo isticmaalaya dab, iyo isticmaalka jeermiska kale ee kale ayaa noqon kara mid aan macquul ahayn.
Badanaa qoyaanku waxay ku ururaan baqashada qoryaha (ka dib oo dhan, ma qallajiyaan sida ugu dhakhsaha badan sida biraha), taas oo ka dhalatey taas oo ka yimaada dulinyada ku dul dhisi karo geesaha.
Baqashada isku dhafka ah, waa suurtagal in la xakameeyo noocyada shimbiraha booyadaha ah ee haysta buro adag, maadaama ay dhaawici karaan.
Maxay tahay qorshaha qafiska, ma fududa oo kaliya shimbiraha, laakiin sidoo kale guriga?
Marka aad bilowdo barashada iyo runtii qaadashada soo saarida unug, ma dhigi kartid "dhab ah".
Kadib, ma aha marwalba suurtagal in la isku xidho shabakad isku meel ah, ama si aad u ogaato qiyaasta saxda ah ee guddiga.
Hase ahaatee, sida ku xusan talooyinka masters-ka ee khibraddan ku leh ganacsigan, qafiska ugu weyn ee shimbiraha (taas oo ah 30 qof) waa inay ahaataa 40 sentimitir ballaaran, iyo 1 mitir dheer. Isla mar ahaantaana, haddii caleemaha hilibka ee digaagduurtu koraan, ama hilibka-taranka, ka dibna 5 sentimitir waa in lagu daraa ballaca iyo dhererka.
Isla mar ahaantaana, ha iloobin xayawaanka ukunta, taas oo sidoo kale qaadan doonta meel bannaan (waxaan hore u sharraxnay cabbirada kor ku xusan).
Si kastaba ha ahaatee, si sahlan ee qafiska laftiisa, waa in la sameeyo si aad u weyn, si dabiici ah u bilaabaan 30, 20-25 shakhsiyaadka digaagga mustaqbalka.
Xaaladdan oo kale, unugyada waxaa lagu helaa cabbirka 72 by 52 santimitir, si fiican, ama 28 illaa 20 xagasha shabaqa, haddii aad siisay faa'iidada dhismaha birta.
Laakiin xitaa way ku haboon tahay in la soo saaro unugyada shakhsiyeed, laakiin dhammaan qalabyada, halkaasoo unug kasta lagu rakibay midka kale midka kale iyada oo la adeegsanaayo qalab gaar ah.
Sidaa daraadeed, waxaa suurtogal ah in la sameeyo roogga ugu fudud ee dhererkiisu yahay 1.95 mitir, dhererka 1 mitir iyo qiyaasta 60 sentimitir (oo leh dhererka qadarka ukunta), kaas oo si sahlan u hirgelin kara inta u dhexeysa 150 iyo 200 shimbiraha mana qaadan karo meelo badan. Iyada oo dhammaan xuduudaha la tixgeliyey, waxay ku jiri doonaan 5 unug.
Marxaladaha ugu waaweyn iyo qaababka dhismaha unugyada isticmaala mesh silig
Diyaarinta maaddooyinka lagama maarmaanka u ah dhismaha unugyada
Waxaan dhisi doonaa kan ugu caansan ee loogu talagalay 25 qof oo digaagduur ah, taas oo ah habka ugu fudud ee loo dooran karo walxaha cabbirka loo baahan yahay. Sidaa daraadeed, waxaanu soo iibsanaa qalabka soo socda:
Mesh biraha leh ballac hal mitir iyo badh iyo iyada oo cabbirka unugyada aan ka badneyn 2.5 ilaa 2.5 sentimitir. Waa mid ku habboon in la doorto dhexroorka rodol ee 1.8 millimitir.
Xadhiggu wuxuu ka samaysan yahay wax la mid ah, laakiin horeyba waa 1 mitir oo ballaaran oo unugyada yaryar - 1.2 ilaa 2.4 sentimitir. Dhibaato la'aanta, shabakad noocan oo kale ah waxaa laga heli karaa dhexroorka 1.4 mm ee xumbada. Waxay u adeegi doontaa sida qolka unugyada, kaas oo sharxaya unugyada yar yar.
Wixii santuuqa ah, waxaad u baahan tahay warqad galvanized ah, taas oo la qaadi karo ka dib qaab dhismeedka aasaasiga ah ayaa la dhisay. Sidaa awgeed, waxaa suurtagal ah in la qaado qayb ka mid ah cabbir gaar ah, iyada oo aan lumin lacag ama qalab.
Si aad si adag u hagaajiso dabaqa waxaad u baahan tahay 6 nooc oo caag ah.
Xirfadaha birta, oo si khaas ah loo soo saaro shaqada oo leh qalalan. Waxay u adeegi doontaa sida quudiya shimbirahayaga. Iyo sida cabbitaanka khamriga ugu dooro dhaqaale ayaa noqon doona dhalo caadi ah oo caag ah.
Helitaanka wax soo saarida unugyada: talaabo talaabo talaabo
Waxaan qaadannaa boggeena hal mitir iyo mitir badhkeed oo jarjar bir ah oo kaliya 20 unug oo dherer ah. Waxaan tirineynaa labada dhinac ee ka soo baxa 16-unugyada unugyada oo leexinaya shabakada si ay warqadda P. u soo baxdo, waa midka ugu haboon in loola jeedo unugyada naftooda, oo aan ahayn isgoysyadooda.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in qaybta aan si adag loo jari karin unugyada, hase yeeshee dhinacyada ulaha ayaa laga tegayaa. Waxay kuugu fiicanyihiin in lagu xiro derbiga danbe iyo dabaqa unugyada mustaqbalka.
Waxaan ku dhajinaynaa dabaqa shaashadda, taas oo aan u baahnayn inaan jarno qiyaastii 72 sentimitir ka ballaaran mitirka mitir (dabiiciga, waxa fiican inaad isku daydo in yar oo aan la qaloocin). Badanaa waxa ay soo baxdaa 60 unug oo ballaaran. Ha iloobin inaad ka tagto dariiqyada saqafyada, ka dib markaad foorarsatid qaabka naqshadeynta uu noqon doono mid daba joog ah oo lagu kalsoonaan karo.
Laga soo bilaabo qaybta ka soo baxda waa inay leexisaa derbiga danbe. Waxay ku dhici doontaa meel 16 sintimitir (6.5 unugyada mesh).
Isticmaalida haraaga bikrada ah ee ka soo baxaya shabakada, derbiga gadaashu waxay ku xiran tahay xuddunta ugu weyn, oo ka dambeysa dabaqa hoose ee derbiyada. Habka loo dejiyo dhulka waa inaadan iloobin in laysku daro ukumaha waa in ay ahaato mid yar. Taasi waa, haddii derbiga gadaal u noqda 16 sintimitir sare, laakiin derbiga hore waa inuu noqdaa qiyaastii 19 (= 7.5 unugyo).
Laga soo bilaabo inta ka soo hartey dhismaha dabaqa hoose, oo ka soo baxa qaybta hore, waxaanu ka dhignaa qashin kor ku xusan sida ku xusan xuduudaha hore ee kor ku xusan. Waxyaabaha ugu muhiimsan - ha ilaawin dhinacyada, taas oo badbaadin doonta ukumaha ka soo dhacaya dhulka.
Foornada waxaad ku dhejisaa derbiyada adigoo xiraya caagag.
Si looga dhigo derbiga hore, oo u adeegi doona albaabka, waxaan u baahan nahay gabal mesh 6 ilaa 28 unugyada. Waxaan ka gooyay hal-mitir hal mitir, halkaasoo unugyada ay ka weyn yihiin.
Iyada oo laga caawiyo qaybo kala duwan oo xadhig ah ama ayadoo la adeegsanaayo ulubaha ka soo baxa waxaanu hagaajineynaa qaybta la helay ee hore. Waxaan sidoo kale garaacnaa dabaqan albaabka hore ee albaabka iyagoo qaadanaya naqshado shaqsiyeed, taas oo mustaqbalka aan lahayn dhibaatooyin dib loogu laaban karo si loo furo qafiska.
Albaabka waxaa sidoo kale laga samayn karaa korkiisa qafiska, isaga oo jaraya qeyb ka mid ah 6 n8 unugyada "saqaf" oo si haboon u xaqiijinaya. Si kastaba ha ahaatee, naqshadahan, unuggu ma'aha mid ku haboon inuu meel dhigo.
Waxaan sameynay gawaarida, horeyna ugu duubay dhinaca gadaasheeda 45º. Marka xigta, qaado qiyaas dahab ah oo qiyaastii 80 illaa 60 sentimitir, dhufan dhamaan dhinacyada kala duwan: saddex dhinac ayaa kor u kaca iyo hal (hore) hoos.
Waxaan dhalooyin iyo quudin ka sameysan dhalada iyo profile, ku dheji qafiska adigoo isticmaalaya silig.
Unugaan noocan oo kale ah ayaa loo isticmaali karaa isla markiiba, inkastoo ay habboon tahay in lagu daaweeyo xal jeermiska.
Waxaan u dhiseynaa baqshiish ka samaysan duufaan
Wooden ama plywood (taas oo ah mid aad u jaban) unugta waxaa loo dhisay si waafaqsan nidaamyada iyo mabaadiida, sida birta kor lagu sharraxay.
Waxa kaliya ee ay tahay dabaq kasta oo ka mid ah waa inuu ka jiraa shabakadda. Si kastaba ha noqotee, unugyada noocan oo kale ah waxay leeyihiin shuruudo gaar ah. First of dhan Qalabka la isticmaalo waa in lagu xoqo maqaarka ama antibeptictaas oo ah biyo ku saleysan.
Tallaabooyinka sida saxda ah waxay ka hortagi doonaan raasamaalka qoyaanka iyo muuqaalka bakteeriyada kala duwan.
Jajabiyaha waxaa badanaa lagu dhejiyaa kafar hore, iyo dhinacyada - cabbayaasha. Sidoo kale waa la samayn karaa si madaxbannaan, haddii dabcan aadan ku tiirsanayn qalabka lagu sharraxayo naqshadeynta mustaqbalka.
Wixii macquul ah, unugyada noocan oo kale ah ayaa sidoo kale lagu talinayaa in ay daboolaan wargeysyada, maxaa yeelay marka qashin la soo saaro, wax walba oo agagaarka ah waxay noqon karaan kuwo wasakh u leh saxarada shimbiraha.
Sidaa darteed, waa inaad haysataa kafateer soo jiidasho ah, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad mar walba ku hayso daaqada si ay shimbiraha u helaan ugu yaraan qorraxda qoraxda.
Sidoo kale faa'iido darro ah isticmaalka alwaax iyo kumbuyuutarka loogu talagalay samaynta unugyada waa miisaanka dhismooyinka soo if-baxaya, taas oo aad u adag in la qaado, gaar ahaan shimbiraha gudaha.
Waxa kale oo xiiso leh inaad ka akhrido dhismaha gurigaaga goobtaada.
Sidee looga takhalusi karaa raadadka digaaga ee gurigaaga: talooyin wax ku ool ah
Dhinaca kale, waxaa haboon in haanta shimbiraha lagu hayo guriga, maadaama aanad u baahnayn inaad la timaaddo qalabka gaarka ah ee kuleylka unugyada, laakiin dhinaca kale, waa wax aad u dhib badan, sababtoo ah guri ama guri ayaa si aan fiicnayn u shimbirooba una noqon kara wasakh.
Laakiin xitaa dhibaatooyinkaasi waa la maareyn karaa haddii ay hore u sii socdaan.
Sidee loo hubiyaa guriga cusub, haddii ay ku nooshahay digaagduur?
Marka hore, marwalba waa inay noqotaa nadiifi saxanka qolkataas oo dhammaan qashinka la ururiyo. Waxaa ugu fiican in la sameeyo 1-2 jeer maalintii, oo ku daadin leh qaar ka mid ah jeermis dilaha (si aanay u waxyeeleynin shimbiraha).
Marka labaad, iyo sidoo kale bisadaha, waxaad isticmaali kartaa fiilo joogto ah si aad u ilaaliso digaaga, saameynta ay taas oo aad isla markiiba ku ogaan doonto.
Seddexaad, isticmaalka laba dabaqood ayaa ah habka ugu waxtarka badan ee lagu xakamayn karo ururrada shimbiraha. Adigoo xarig ku leh hal qafis, waxaad ku dhaqi kartaa midka kale oo waxaad ku ridi kartaa waddada loogu talagalay hawada.
Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la sameeyo tan marka la isticmaalo sariirta alwaax, taas oo urta si gaar ah loo nuugo.
Qalab fudud oo loola dagaallamo quudinta cuncunka
Dhibaato kale oo soo baxdo marka la hayo qaboojiyaha waa cunto lagu kala firdhay qafiska. Ka dib oo dhan, shimbirahan ayaa aad u firfircoon, oo si joogto ah raadinaya cuntada ugu fiican.
Isla markaa, haddii aad siiso cuntada ugu fiican - natiijadu waxay noqonaysaa mid isku mid ah. Sidaa darteed, in ka badan feeder, waxaad si fudud u rakibi kartaa shabaqa ah oo ka hortagi doona shimbiraha in laga xaday.
Sidaa darteed, waxaad xaqiijin doontaa ma aha oo kaliya nadiifinta, laakiin sidoo kale ku quudin kaydka. Diidmada noocaas ah waxaa lagu samayn karaa qaab guri, taasoo macquul noqon karta in aan la qaadin xiitaa marka xitaa la seexdo.
Laakiin, dabcan, toddobaadkiiba hal mar ayaa quudiyaha wali waa in laga nadiifiyaa haragga haray.
Waxaan kufaraxnaa boodhka kaas oo ka soo dagaya guriga isaga oo ka soo jeeda cuntada
Dhinaca kale, habka ugu fudud ee lagu xalin karo dhibaatadani waa in la cuno shimbiraha qoyan ee qoyan, halkii ay ka heli lahaayeen quudin qalalan. Laakiin dhibaatadu waa - mar kasta ma aha wakhti ku filan oo lagu sameeyo.
Xaaladdan, caawinaad kaliya isticmaalka qashinka gaar ah. Waxay yihiin prototypes of anthers, kuwaas oo lagu isticmaalo baabuurta iyo ku lifaaqan ee ku yaalliin.
Taas oo dhan, waxaad samayn kartaa qalab noocan oo kale ah: qaado shabaq leh unugyo aad u dhaadheer kuna kala jimee qaab gaar ah oo diyaarsan, cabbirada taas oo ah laba jeer cabbirka unugga. Haddii qaabka noocaas ah loo dhigo qafis, waxay si buuxda u soo jiidi doontaa boodhka oo dhan.
Waxyaabaha kali ah - marmar ahaan boodhkan waa inuu ka soo baxaa shayga laftiisa.
Faa'iidada kale ee loo adeegsanayo qaabka la tilmaamay sida ururinta boodhka ayaa ah in haddii aad si joogto ah u lumiso, waxay saameyn doontaa kororka qoyaanka. Tani waxay muhiim u tahay shimbiraha naftooda, taas oo, marka qallalan, bilaabaan in ay jebiyaan oo baadho dhicin.